ကမ္ဘာပျက်ကပ်တွင် မြန်မာပြည်လည်း ပျက်မည်ဟု ထိုင်းဘုန်းကြီးဟောကိန်းထုတ် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Hoax » ကမ္ဘာပျက်ကပ်တွင် မြန်မာပြည်လည်း ပျက်မည်ဟု ထိုင်းဘုန်းကြီးဟောကိန်းထုတ်
Posted by kai on Mar 24, 2011 in Hoax, News | 11 comments
ကိုမိုးသီးဇွန်ဘလောက်မှာတွေ့လို့အော်ရီဂျင်နယ်က သွားကူးလာတာပါ. ..။ အောက်မှာ မူရင်းသတင်းကို ဘန်ကောက်ပို့စ်က ကူးတင်ပေးထားပါတယ်..။
ဘုန်းကြီးဟောကိန်းက .. ဒီနှစ်ထဲ သဘာဝဘေးကြီးတွေ တိုင်းပြည်တွေတော်တော်များများမှာဖြစ်မယ်တဲ့..။
ပင်လယ်လှိုင်းတွေက .. အာရှတိုက်၊ ဥရောပတိုက်..စတဲ့ တိုက်ကြီးတွေကို လွှမ်းမယ်တဲ့..။
ဗီယက်နမ်ဆိုရင် တနိုင်ငံလုံး ပျက်င်္စီးမယ်ဖြစ်ပြီး မြန်မာပြည်လည်း နေရာနည်းနည်းပဲ.. ဘေးလွတ်မယ်ဆိုပဲ..။ အဲ.. ဘန်ကောက်လည်း ပျောက်သွားမယ် ဆိုပါတယ်..။
ဆိုတော့ .. စာရင်းချုပ်ရရင်.. သူ့ဘုန်းကြီးကျောင်း.. ငွေလှူကြပါနော..။ လို့ပါ..။
Published: 24/03/2011 at 12:00 AM
The Secretariat of the Sangha Supreme Council will send officials toatemple in Loei province to determine whetherawell-known preacher who last month predicted the end of the world was near has breached Buddhist teachings.
The council’s move follows allegations that Phra Somchai, known as Luang Phor Porsrisuriya Khemato,apopular preacher at Wat Romportitham in Loei’s Nong Hin district, has engaged in conduct unbecoming ofamonk.
He reportedly allows fellow monks to wear long hair, grow beards and tells them not to perform routine prayers, which is against the Sangha rules.
Phra Somchai was also thrust into the media spotlight after scores of panic-stricken people flocked to his highland temple after he predicted last month the world would end soon.
Amnart Buasiri, director of the Secretariat of the Sangha Supreme Council, said officials have been sent to the temple in Loei province to check if Phra Somchai had broken any rules.
If Phra Somchai considered himself to beamonk, he must not behave improperly. Monks must have their heads shaved and take morning alms, said Mr Amnart. The preacher would be defrocked if he was found to have acted against Buddhist teachings, said the director of the council, the clergy’s governing body.
Phra Somchai had predicted the natural disasters that struck several countries this year and this made his followers believe his forecasts were accurate.
Many relocated to his highland temple fearingagreat flood.
In his preachings last month, Phra Somchai said that in March all continents would collapse and be wiped out by giant waves.
He warned that Vietnam would be completely destroyed while small areas of Burma would remain intact. Bangkok would disappear but much of the Northeast spared the catastrophe due to its large concentration of Buddhist sites.
Around 300 resort-like houses were built in the vast temple area, which was expanded from 800 rai to 1,000 rai. Most of the temple land was degraded forest land which was donated to the temple. It houses about 150 monks. Owners of most of the houses were wealthy people.
ဒါဆိုရင်တော့ ဘုန်းကြီးဟောထားတဲ့ နိုင်ငံထဲမှာ မပါတဲ့ဆီပြောင်းနေရမယ်။
မြန်မာပြည်မှာ ဆန်စပါးရှားမယ်၊ သံလွင်နဲ့ချင်းတွင်းမြစ် တခုခု မြစ်ရေကြီးရေလျှံပြီး ရေဘေးဒုက္ခဆိုက်မယ်လို့ သတင်းတယ်ဗျို့။ သက်သတ်လွတ်စားကြပါဗျို့။ သံသရာ၊ ၃၁ဘုံ၊ ကံ တန်ခိုးအဘိညာဉ်၊ စိတ်တန်ခိုးသတ္တိတွေကို ယုံကြပါဗျို့…..
ဟုတ်တာ မဟုတ်တာအပထား ဟောကိန်းထုတ်ရတာတော့ လွယ်တယ်။
မဟုတ်ရင် ဘယ်သူမှ မပြောဘူး။
ဟုတ်သွားရင် တွေ့လား ဒီဆရာတော် ဒီဘိုးတော် ပြောတယ်မဟုတ်လား လို့။
နာမည်ကြီင်္းချင်ရင်တော့ လူတွေစိတ်ဝင်စားပြီး မမြင်နိုင်တဲ့ အရာတွေကို ပြောရတယ်တဲ့…..
ဒီလိုပြောတာမျိုးတော့မယုံပါ။ 2012 မှာ ကမ္ဘာပျက်မယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့။
ဗုဒ္ဓရဲ့တရားတော်တွေကို သက်ဝင်ယုံကြည်မိလို့ လားတော့ မသိပါ။
ကိုကြောင်ကြီး ခင်ဗျားနှယ်ဗျာ။ သောက်တာချင်း အတူတူ မူးပြီး အေးဆေး မနေ ဘာတွေရေးနေတာလဲ။
သူ့ အတိုင်းအတာနဲ့ သူ ပျက်ရင် ပျက်မှာပါဘဲ
၇ှာဖွေတွေ့ ရှိထားလို့ ပါဘဲ
ဒါပေမယ့် သက်ရှိတွေ မျိုးတုန်းဘို့ တော့ မဖြစ်နိုင်သေးဘူးထင်တယ်ခင်ဗျ
ပုံက ဟောကိန်းထုတ်တဲ့ ဘုန်းကြီးပုံလား။ အသက် သိပ်မကြီးသေးဘူး ထင်ပါရဲ့။
အများမိုးခါးရေ သောက်မှတော့ အားလုံးတူတူပေါ့။ အပြူးက အမူးသာပြီး အထူး လည်း မလုပ်ချင်ဘူး။ လာရင်တော့ ရင်ဆိုင်လိုက်ရုံပါဘဲ။
သူ့ ကျောင်းကိုငွေလာလှူရအောင် ဘုန်းကြီးနဲ့ ငွေနဲ့ အပ်စပ်တာကိုး…………..
အဘနီ ရေ.. ၀ိနည်းထိုတဲ့ ဘုန်းကြီးများ အခု နောက်ပိုင်း အတွေ့ရနည်းသွားပြီ။
ကြောက်တောင်ကြောက်လာပြီ … ဒါပေမယ့် ဘယ်လိုမှ လုပ်လို့မှမရတာ …